ရေခဲခေတ်အနည်းငယ်ရှိနိုင်မလား? | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ထိုမေးခွန်းသည်ဗြိတိသျှသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့အတွက်အလွန်ရှင်းလင်းသောအဖြေဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်»နက္ခတ္တဗေဒနှင့်ဘူမိရူပဗေဒ» ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်ခန့်တွင် Ice Age ကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်.
၂၀၂၁ တွင်အပူချိန်ကျဆင်းနိုင်သည်ဆိုလာသံလိုက်လှုပ်ရှားမှု၏သင်္ချာပုံစံအရ၎င်းတို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် လေ့လာ။ သိပ္ပံပညာရှင်များကဆိုလာသံသရာသုံးခုအတွက်သံလိုက်လှိုင်းများကျဆင်းခြင်းကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ဤကျဆင်းခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအအေးပိုင်းရာသီဥတုများနှင့်ကိုက်ညီပြီး“ Maunder Minimum” ဟုလူသိများသည်။ နေသည်အစက်အပြောက်မရှိသည့်ကာလဖြစ်သည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ Northumbria တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခတစ် ဦး ဖြစ်သူ Valentiza Zharkova က ၂၀၃၀ ခုနှစ်အတွက်အနည်းဆုံးသို့မဟုတ်ရေခဲခေတ်သစ်ကိုခန့်မှန်းခဲ့သည် ဒါ့အပြင်နှစ်ပေါင်း 30 ကြာရှည်လိမ့်မယ် ကြယ်ဘုရင်၏အနိမ့်သံလိုက်လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်။
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တာပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ မြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပသည်ဆောင်းရာသီအလွန်အေးသောရာသီဥတုကိုခံစားခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးအချိန်သည် ၁၇ ရာစုတွင်ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၅၀ မှ ၆၀ အထိကြာခဲ့သည်။ ထို့နောက်အသုံးပြုပုံ လန်ဒန်မြစ်သိမ်းစ်မြစ်သည်အေးခဲသွားသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အေးခဲခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ခန့်မှန်းချက်မှန်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အထူးသဖြင့်အလွန်အေးသောအချိန်တွင်ခက်ခဲသောအချိန်များရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်သံသယမရှိဘဲကမ္ဘာကြီးအတွက်လတ်ဆတ်သောလေကောင်းလေဖြစ်မည်။ အပူချိန်နှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှရေခဲပြင်သည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အလွန်လိုအပ်သည် (အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်) ကိုပြန်လည်ရရှိရန်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ခန့်မှန်းချက် » ရေခဲခေတ်အနည်းငယ်ရှိနိုင်မလား?
မုန်တိုင်း Bruno ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု Balance